Antstream: Yemahara Retro Cloud Mitambo Inowanikwa yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Antstream: yemahara retro gore mitambo inowanikwa yeLinux
Mitambo mune fomu yemuviri inoita kunge ine mazuva avo akaverengwa. Yakave nguva yakareba kubvira pavanogona kutengwa muzvitoro senge zveiyo PlayStation kana iyo Xbox, asi ikozvino iwe unogona zvakare kutamba mazita ari mugore. Izvi zvinoreva kuti haudi komponi, ingori komputa inokwanisa kubatana neinternet uye nekuisa webhu browser. Nepo vamwe vakaita seGoogle kana Microsoft vachishanda kuti vatipe mazita ezvechizvino-zvino, pane sevhisi yakazvipira kutiendesa kune yakapfuura, uye zita rayo ndere antstream.
Nekuti mitambo yazvino yakanaka kwazvo, hapana anoramba izvozvo, zvirinani kune wese munhu akaita seni akapedza maawa akawanda (uye ayo asara) achitamba saga weHondo Hondo, asi zvekare ivo vachagara vari vekare. Munguva yangu yekuzorora, ini ndichiri kukwevera kudhonza MAME kuti ndirove zvakanyanya nekurova zvibodzwa muTehkan World Cup, asi kubva zvino zvichienda mberi ini ndichapedza nguva yakawanda ndichiona mazita aAntstream.
1 Antstream inoita kuti titambe mitambo yemahara yeRetro chiuru
2 Ndinoiisa sei paLinux
Antstream inoita kuti titambe mitambo yemahara yeRetro chiuru
Uye ndezvekuti, izvozvi, Antstream inopa mukana wekutamba zvinopfuura zviuru zvina zvemazita, asi vese zvavo kubva kumuchina weArcade, zvinyaradzo zvekare kubva kuma80-90s kana kunyange makomputa senge Commodore Amiga. Zvakanakisa? Chii chemahara. Iyo puratifomu inotsigirwa-kushambadzirwa, chimwe chinhu chandisina kuona ini panguva yese yandanga ndichiitamba paLinux.
Antstream ibasa rewebhu, asi kuti unakirwe nezvose zvarinotipa isu tinofanirwa kuisa application. Izvo hazviwanikwe kubva kune webhu browser. Vashandisi veLinux vanofanirwa kuisa yavo snap kurongedza, kubva ipapo, kana isu tisina account, tinogona kugadzira imwe. Sokunge yaive imwe yemapuratifomu anozivikanwa, isu tine yedu nhoroondo iyo inogona kukwirisa sezvatinotamba, uye kune chinzvimbo nezvibodzwa. Fungidzira ndiani akazviita kune veGumi Gumi mune yavo yekutanga Art yekurwa mutambo?
Kufambisa kunyorera kuri nyore. Isu tine chikuru skrini, sarudzo yekutsvaga, chimiro chedu, kubudirira, mameseji uye chikamu chine makwikwi ari kutambwa. Kana isu tikazarura mutambo, chinhu chekutanga chatinozoona ichave madhiraivha, ayo anowanzo kuve miseve yekufambisa yekufambisa protagonist uye Z, X, C kana makiyi ekuvhara ekuita. Uye kwete, haugone kumisikidza makiyi. Asi hongu! Tinogona kubatanidza vatongi! Semuenzaniso, iyo DualSock 3 inoshanda zvakakwana, kana iwe ukajaira kune default mabhatani.
Ndinoiisa sei paLinux
Hatisi kutaura nezvechikumbiro kubva kukambani inozivikanwa seValve, kana kunyangwe chirongwa chakafanana neLibretro, chinotarisirwa RetroArch. Saka isu tinofanirwa kugadzirisa izvo zvavanotipa, iri parizvino iri snap kurongedza. Naizvozvo, kuti umise, ingovhura terminal uye wonyora, pasina makotesheni, "sudo snap install antstream-arcade". Mune masystem umo rutsigiro harubvumidzwe, unofanira kutanga waugonesa, chimwe chinhu chinotsanangurwa mukati Iyi link.
Saka ikozvino unoziva. Kana iwe uri mune retro, Antstream ndiyo yakanaka sarudzo nekuti yemahara uye haidi chero yakasarudzika setup. Dambudziko chete nderekuti kune mitambo ine mukurumbira isiri iyo, saNintendo. Hapana munhu akakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Antstream: yemahara retro gore mitambo inowanikwa yeLinux
Zvakanaka, hazvisi zvekuti ivo havagone kuve vakakwana. Nintendo yakafanana nechando chechando, yakanyanyisa uye inofunga kuti yakakosha. Sezvo inowanzo nguva nenguva kutumira kutumira uye kurega ziviso kune avo "vanotyora IP yavo" kunyangwe vaine makore anopfuura gumi vasina chavanoita nacho. Zvinopfuura zvinonzwisisika kuti hapana mitambo yeNintendo.
Zvakanaka kwazvo, ndatenda nekugovana
Dzorerazve rutsigiro rwekutamba zvakachengetedzwa zvemukati pane yako Raspberry Pi nemhinduro idzi
Lakka 3.4 inosvika pamwe nekuvandudza, kugadzirisa kwevanodzora tafura uye nezvimwe